Momba anay - Beijing IWHR Corporation (BIC)
Ny sehatry ny asa dia mandrakotra indrindra:
BICmiasa indrindra amin'ny fikarohana amin'ny sehatry ny teknika mifandraika amin'izany toy ny loharanon-drano sy rano any ivelany ary firenena, ny fifandraisana, ny angovo, ny lalamby, ny injenieran'ny tanàna, ny fananganana sns. Fanadihadiana sy famolavolana injeniera, fananganana, fanaraha-maso, fakan-kevitra ary fanombanana, fanaraha-maso sy fanaraha-maso, EPC; fikarohana sy fampandrosoana, famokarana ary fivarotana fitaovana enjeniera vaovao, fitaovana fanaraha-maso sy rafitra mifototra amin'ny fampahalalana, fitaovana fitsaboana rano, ary fitaovana elektro-mekanika; miasa irery sy miasa ho mpandraharaha amin'ny fanafarana entana sy fanondranana karazana varotra sy teknolojia isan-karazany.
Fiarovana ny rano
Omeo ny volavolan-kevitry ny mpanolotsaina, ny atiny feno, ny fifanarahana tetikasa fametrahana fitaovana ary ny serivisy aorinan'ny varotra kely sy salantsalany; Famolavolana, famokarana ary fametrahana tohodrano fingotra, tohodrano fanamafisam-peo;
BIC dia mpamatsy fitaovam-pitsaboana sy fanamboarana rano any Sina ary manana ekipa matihanina amin'ny endrika, injeniera ary mpiasa mpitantana. Manome fakan-kevitra momba ny teknika, Procurement and Construction (EPC) amin'ireto faritra ireto ihany koa izahay: ny fitsaboana ny rano (ETP), ny rano fanariam-pako amin'ny rano (ny rano maloto tannery, ny fanontana pirinty sy ny fandokoana, ny rano maloto fanaovana taratasy, ary ny rano maloto amin'ny zavamaniry simika) , tetik'asa famatsian-drano sy fitsaboana karazana rano manokana (rano arsenika, rano fluorine, rano manganese forum ary rano mangatsiaka). Taorian'ny fikarohana nandritra ny taona maro, namolavola andiam-pitsaboana rano mifandraika amin'izany ny BIC, anisan'izany ny: Ultra Filtration (UF ), Reverse Osmosis (RO), Membrane Bioreactor (MBR), Desalination an'ny ranomasina, fanesorana solika ary zavamaniry fitsaboana rano misy fitoeran-drano, ary paompy mitaingina fiara fitaterana vonjy maika. Ireo vokatra ireo dia revolisionera ary azo alaina amin'ny vidiny mirary.
Varotra fampidirana sy fanondranana
Araraoty ny fanafarana sy ny fanondranana karazana entam-barotra isan-karazany mifanaraka amin'ny politikam-panjakana na tsy miankina na amin'ny maha-agents;